AT&T Na-emechu m ihu na ngwụsị izu a, mana ndị were ha n'ọrụ Emeghị | Martech Zone
Oh AT&T. Oge ụfọdụ n’ụbọchị Sọnde, enwere m DSL. Mgbe m ruru n’ụlọ n’abalị Sọnde, m kpọrọ ndị na-akwado ha. Nke a bụ ebe ntụrụndụ malitere. Ha nwere usoro arụ ọrụ olu na AT & T. Enweghị m ike ịgwa gị nzuzu ọ na-eme m ka ịgwa olu okwu n'akụkụ nke ọzọ nke na-eji kọmputa arụ ọrụ na-enwe olu ụtọ olu ha. Ọ ga-akara m mma pịa bọtịnụ, mana nke ahụ abụghị nhọrọ.
Nke mbụ, usoro ahụ ga-ajụ ma m chọrọ enyemaka en Espanol. N'agbanyeghị na a nwara m ịza, ci, emeghị m. M na-eche ihe kpatara na ha anaghị ajụ naanị asụsụ ị ga-achọ inweta enyemaka na ị ga-ekwu Bekee ma ọ bụ Espanol. Ọ ga-ewe obere oge karịa ịgafe ntuziaka niile n'asụsụ abụọ ahụ.
Site na oku ọ bụla, sistemụ ahụ ga-ajụ m ma m na-akpọ site na nọmba m na-akpọ. N'iji Caller ID, ha jụrụ ma ọ bụ akara ekwentị. "Ee", azaghachiri m sistemụ ahụ.
Mgbasa ozi njide ahụ kwuru banyere ọnụego ogologo ọhụụ dị anya nke nwere ike ịmasị m, yabụ m kwuru "Ee" iji kwuo na m nwere mmasị… sistemu ahụ gwara m na ọ bụ n'èzí oge awa azụmahịa ma kwụgidere m. N'ihi ya, m ga-akpọghachi ma maliteghachi.
Mgbe o gosichara nọmba ekwentị ahụ, olu kọmputa ahụ jụrụ ya, sị, “Gịnị ka ị na-akpọ?” m ga-asị "DSL anaghị arụ ọrụ". “Ọ dị mma”, kọmpụta dị ike ga-asị na obi ruru ya ala na ọ nwere ike ịtụgharị olu m. Mgbe ahụ, m ga-zigara a CSR… Ana m eche na ọkwa 1.
Ajụjụ mbụ si CSR? “Kedu ọnụọgụ ị na-akpọ?”. Enweghị m ike ikwenye na ejiri m oge ikpeazụ gwa igwe okwu iji gosi ọnụọgụ nke m na-ekwu maka ya na CSR jụrụ m otu ajụjụ ahụ. Ya mere, ana m ekwugharị nọmba ahụ ma gosi m na m bụ onye ahụ nwere akaụntụ m na-akpọ.
Nke a wetara m otu isi… gịnị masịrị gị ma ọ bụrụ na m bụ nwoke ahụ nwere akaụntụ ahụ? Gịnị ma ọ bụrụ na abụghị m nwa okorobịa ahụ nwere akaụntụ ahụ ma ghaara m ụgha? Wouldn't gaghị ama ihe dị iche, gịnị kpatara ị ga-eji jụọ? Rie ude.
“Gịnị bụ nsogbu ahụ?”… Ọzọ voice olu kọmputa enyefeghị ozi ọ bụla na CSR. Ugbu a, m na-akọwa na akaụntụ DSL Pro m dị ala na ọ naghị arụ ọrụ.
“Olee ụdịdị ị nwere?” Odi mma, AT&T, azutara m gi modem gi… gini mere na i maghi na nke ahu? Lee ka ọ ga-esi dị mma ịnụ, "A hụrụ m na ị nwere modemu SpeedStream DSL nke nwere ọkụ 4 n'ihu, ị nwere ike ịgwa m ọkụ ndị na-agba?". Enweghị ihu ọma dị otú ahụ.
O yiri ka a ga-ebuli nsogbu ahụ elu mgbe anyị jere ije site na ịpụpụ Router m na ịme ihe ndị ọzọ. CSR dị mma nke ukwuu, ọbụnakwa 'na-ekpo ọkụ' zigara m ọkwa nke ọzọ, na-egosi m onye ọrụ ntanetị ọzọ na ekwentị. Nkwado nkwado na-esote bụ ezigbo enyi na nke ọma… anyị gbara DSL Modem gaa jaịja ọzọ iji hụ ihe nsonaazụ ga - ahụ ihe nwere ike ịbụ. Ọ wedara DSL m ala iji hụ ma ọ bụrụ na ọ bụ nsogbu ọsọ. Anyị hapụrụ mkparịta ụka ahụ na echiche m ga-anwale modem DSL na ụlọ onye agbata obi m onye nwekwara DSL. Nnukwu echiche. O nyere m nọmba tiketi iji zoo ma kpọọ ya.
M nwalere modem ahụ na agbata obi m wee nweta akara ngosi maka nke abụọ. Chei! Ga-ahịrị.
Mgbe e mesịrị n'abalị ahụ agbabara Starbucks iji nweta njikọ ikuku ma gbalịa ịkpa nkata ụzọ m site na nkwado. O nyere m obi iru ala na agaghị m agwa olu kọmputa ahụ, mana m ga-agabiga ọtụtụ nkọwa akaụntụ na nkọwa ọbụlagodi na m meghere na Nọmba tiketi. Ha na-ewetara tiketi ahụ na oge ọhụhụ maka onye ọrụ ntanetị ga-apụta site na Ngalaba Nweta ASI. N’ụbọchị Mọnde, ndị ọrụ akara n’ahịrị pụta, na-enyocha ahịrị ma gwa m na ọ dị mma. Na epupụta.
Ee, nke ahụ ziri ezi. Ekwesịrị m ịlaghachi azụ, gwa olu kọmputa ahụ, gwa CSR okwu, wee laghachite na ngalaba ọrụ akara maka ịtọlite ​​oge akara aka maka onye ọrụ DSL ga-apụta. Ha enweghị ike ịpụta ozugbo, ha kwesịrị ịhazi ya otu ụbọchị. Njikoka Ugbu a enwere m ndokwa maka Tuesday n'etiti 8AM na 5PM. Usoro nhazi nke oma, eh? Ọ dị mma… Anọ m na ụmụaka 2 na-arịa ọrịa taa, enwere m ọtụtụ oge.
Taa (Tuzdee), onye ọrụ DSL ahụ na-apụta ma na nkeji ole na ole ọ nwere ka m bilie ma jiri modem ọhụrụ rụọ ọrụ. Ebubo m na nleta na modem, ego nke $ 120.
$ 120 iji nweta DSL m bụ n'ezie ihe enyemaka, mana site na ịre ahịa ọ nweghị isi. M na-eche ọtụtụ ndị ahịa DSL ndị ọzọ ejirila AT&T kwalite akaụntụ ha ma soro ha nọrọ ihe karịrị afọ 4. Ha na-enye modem ahụ mgbe izizi batara… mana agaghị enye m freebie mgbe mụ na ha nọrọ kemgbe afọ anọ? Nke ahụ bụ onye nzuzu ndị ahịa. Ọ na-agwa m na ị chọrọ naanị nickel na dime m ọbụlagodi mgbe m kwụchara ntụkwasị obi n'afọ ndị a niile. Mụ na ha nwekwara ọrụ ekwentị.
Nke a bụ isi okwu m banyere nke a. Onye ọ bụla m nwere obi ụtọ iso ya rụọ ọrụ na mbipụta a dị egwu. CSR ọ bụla nwere nkwanye ùgwù, enyi na enyi. Agwara m otu onye nnọchi anya na St. Louis na anyị abụọ kwurịtara banyere obi ekele na ịtọrọ ebe ahụ mere ka ụmụ nwoke laghachi na nne na nna ha.
Ihe na-akụda mmụọ ma daa na mbipụta a bụ azụmahịa, usoro, na teknụzụ - ọ bụghị ndị mmadụ. Anọ m na-enwe ekele mgbe niile na onye nkwado ọ bụla m gwara okwu… Amaara m na ọ bụghị ha kpatara mmadụ kpebiri iji imefu ọtụtụ nde na sistemụ olu dara ụda ya. Onye ọ bụla n’ime ha rịọrọ mgbaghara maka nsogbu ahụ ma kpalie m onye ọzọ dị ka usoro ha si dị… mana usoro ahụ adịghị mma!
Ajụjụ: Gini mere ị ga-eji nyochaa ihe ndekọ ndị ahịa ngwa ngwa ma tinye uru maka iguzosi ike n'ihe ha ma setịpụ nkwado gị dịka o siri mee? A sị na AT&T nyochara akaụntụ m, ha agaghị ahụ mkpesa ma ọ bụ nsogbu na afọ 4 na otu nwelite na akụkọ nkwụnye ụgwọ siri ike. Nke a ekwesighi ka onye ọrụ DSL dị larịị zipụ ozigbo, na-akwụghị ụgwọ, dozie usoro ahụ, ma wụnye modem ọhụrụ? Echere m na otú ahụ ... ma onye na AT & T doro anya na-ekwetaghị.
Achọrọ m ime ka unu niile mara na ahụ ọkụ nwa m nwanyị dara taa na ọ na-alaghachi n'ụkwụ ya. Enwere mmechi ukwu na agaghi m agunye ya n'uju, mana enwere m obi uto ka ya na aru ike ma rie ozo.
Nwa m nwoke na m na-alụ ọgụ na nke a, mana idebe ihe nchacha na nhicha aka na-enyere aka, echere m na anyị ga-eme ya. Ekele ndị folks ahụ n'onwe ha ruru ma jiri email ma ọ bụ zaghachi. Obi ebere gi di egwu ma enwere m ekele maka ya. M na-arụ ọrụ maka nnukwu ọrụ ma na-ekweta na ọ bụ naanị otu onye na-akpọ ma ọ bụ emailed site n'ebe ahụ ... ma ọtụtụ n'ime unu, ibe m na-ede blọgụ, ruru si n'ụwa nile.
Chaị - nke ahụ na-agbapụ m n'ezie! Daalụ.
Usoro akụrụngwa akpaghị aka na-ada dị nzuzu. Anyị enweghị ebe a ya mere obi dị m ụtọ. Pịa bọtịnụ kachasị mma!
Agbanyeghị, ọrụ ndị ahịa n'ọtụtụ ebe ebe a na-amị. Ọkara nke oge ahụ ha anaghị aghọta nsogbu gị. Nsogbu nke ulo oru BPO!
Echere m na ọ bụ ya mere ATT ji bụrụ onye kachasị njọ na ọrụ ndị ahịa… http://www.crmlowdown.com/2006/11/the_10_best_and.html
Jenụwarị 17, 2007 na 12:38 PM
Daalụ maka ihe atụ ahụ, Doug. N'uche m, nke a bụ ihe na - eme mgbe anyị gwara ndị ọrụ anyị ka ha dị mma
kama jiri nke ahụ dị ka atụmatụ ndị ahịa anyị. Enweghị nyocha nke ndị ahịa na-emetụ, enweghị echiche site na usoro nke
mmekọrịta. M na-akpọ nke a "Random omume nke CRM."
Obi dị m ụtọ ịnụ ka nwa gị nwanyị adịkwuola mma!
Jenụwarị 17, 2007 na 3:38 PM
Achọtara m ihe ọchị a Ndị ahịa
M obi sie DSL dị na m ebe (ndidi a-eguzosi ike n'ihe ahịa nke 10 afọ). Site na otu ubochi, aghaghi m wedata ala site na 3.0Mbps (29.95) nihi na “uzo a enweghi ike ijikwa ososo n’ihi ebe di anya site na ulo oru DSL - 6,500ft). Ihe ndị ahịa ha leghaara ịgwa m. N'otu oge na 1.5 Mbps (19.95 kwa ọnwa) akara ahụ nọgidere na-apụ na-enweghị usoro na n'oge kachasị njọ. Round Three, AT&T techs downgraded my service to ọkara nke 1.5 Mbps ka 928kbps (ma ọ bụghị kwa ọnwa na-eri) - iji jide a ufọk ufene akara - Ọ dịghị chi ọzọ.
Akwụsịrị m ọrụ m, araparawo m $ 200 kagbuo ego n'ihi na ha ahịa ndị mmadụ nyere m a dị iche iche "mmalite" ụbọchị maka 30 ikpe karịa ha "techs" mere. Mgbe awa 5 gwachara ndị ọrụ 11 dị iche iche n’akụkụ m (na India) ma nwee ndetu na aha iji gosipụta ihe m kwuru, ha jụrụ ige m ntị ọzọ. Ndị ọkachamara 8 niile m kwurịtara gwara m ugboro ugboro na "usoro ahụ ejighị n'aka."
Okwu ohuru ??? "AT&T - ụlọ ọrụ na-adịghị na Nkwukọrịta Azụmaahịa."